ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ၂၀၁၄ ကို စဉ့်တုံးဖြင့် ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်း
မောင်လေးမောင်မျိုး အတူတူပဲ ..အကြံတွေ ဦးနေသလားတောင်မှတ်တယ်.
အစ်မတို့အိမ်ကတော့ သူတို့ထုသမျှကို တံမြက်စီးတုတ်ချောင်းနဲ့
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်.
ကြောင်ကြောင်က ဒီလိုတော့လဲ အဟုတ်သား...။
အမလေး...ဒီမှာလည်း အဲဒီလို အပေါ်ကထု...အိမ်ရှင်မိသားစုက သီချင်းကို အကျယ်ကြီးဆို မနက် ၂ နာရီအထိ ရုပ်ရှင်ကြည့်...ညည်းမခံနိုင်တော့လို့နောက်စနေနေ့ ပဲ ပြောင်းတော့မယ်...ငမျိုးလို ပြန်ထုဖို့စဉ်းထုံးဝယ်ဦးမှပဲ...Happy Belated New Year ပါ ငမျိုးရေ ...;)
တုတ်ရှည်ရှည်ဆောင်ထား ငမျိုး။ ခုံခုဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။း)
အမသာဆို ပေါ်တင်သွားပြောမိမလားမသိဘူး. သူများအနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ထိမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ သူတို့ သိအောင်လေ